Qorshooyinka Casharka: Sexting - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Qorshooyinka Casharka Bilaashka ah Qorshooyinka Casharka: Galmada
Qorshooyinka Casharrada: Galmada
Muuqaal gaar ah oo ka mid ah casharada Aasaaska Abaalmarinta ayaa diiradda saaraya shaqeynta maskaxda qaangaarka. Tani waxay ugu fiican ka caawinaysaa ardayda inay fahmaan oo dhisaan adkeysi waxyeellada ka iman karta isticmaalka galmada iyo filimada. Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa lagu aqoonsaday Kulliyadda Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud ee London si ay u baraan aqoon isweydaarsiyo xirfadeed oo ku saabsan saameynta sawir-maskaxeed ee caafimaadka maskaxda iyo jirka.
Casharradeennu waxay u hoggaansamaan Waaxdii ugu dambaysay ee Waxbarashada (dawladda UK) "Xiriirka Waxbarashada, Xiriirka iyo Waxbarashada Jinsiga (RSE) iyo Caafimaadka Caafimaadka" hagitaan sharci ah.
Waxaa loo isticmaali karaa inay yihiin casharro kaligood taagan ama seddex ah. Cashar kasta wuxuu leeyahay dhowr bog oo PowerPoint ah oo lagu daray Hagaha Macallinka iyo, meeshii ku habboon, xirmooyin iyo buugga shaqada. Casharradu waxay la yimaadeen fiidiyowyo gundhig leh, xiriiro kulul oo cilmi baaris muhiim ah iyo ilo kale si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo qaybaha si ay u noqdaan kuwo la heli karo, kuwo wax ku ool ah iyo sida ugu macquulsan ee is-xakameysan.
Hordhac ku saabsan galmada
Galmoodka, Pornography iyo Braincent-ka maskaxda
Sexting, Sharciga iyo Adiga **
** Waxaa loo heli karaa ardayda England iyo Wales iyadoo lagu saleynayo sharciyada England iyo Wales; sidoo kale waxaa loo heli karaa ardayda Scotland oo ku saleysan sharciga Scotland.
Casharka 1aad: Hordhaca galmada
Waa maxay galmada, ama sawirrada galmada ee dhallinyaradu soo saaraan? Ardaydu waxay tixgeliyaan sababta ay dadku u weydiisan karaan una soo diri karaan sawirro sawirro qaawan ah. Waxay isbarbardhigaan halista galmada ee galmada ogolaanshaha. Casharka wuxuu kaloo fiirinayaa sida filimada qaawan u adeegsadaan galmada iyo dhibaataynta galmada.
Waxay bixisaa macluumaad ku saabsan sida looga badbaado dhibaataynta aan loo baahnayn iyo halka laga helo khadka tooska ah, ilaha diiradda saaraya dhalinyarada si ay wax badan uga bartaan.
Ardaydu waxay bartaan sida loo sameeyo sawirada galmada iyaga oo laga saarayo internetka.
Casharka 2: Galmada, Filimada, iyo Maskaxda Dhallin-yarada
Casharkani wuxuu eegaa cajiibka, maskaxda dhalinyarada ee caaga ah. Waxay sharraxaysaa sababta neerfaha cilmiga neerfaha ku dhahaan, "Dhammaan waxqabadyada ka socda internetka, lebbiska ayaa leh awoodda ugu badan ee lagu noqon karo balwad". Sidee bay saameyn ugu leedahay galmada?
Ardaydu waxay bartaan sida waxqabadyada internetka sida lulataayeyaasha, warbaahinta bulshada, ciyaaraha, khamaarka iwm ay yihiin 'dhiirrigelin aan caadi ahayn' oo laga dareemo wax ka xiiso badan wax kasta oo kale.
Immisa lebbis ayaa badan? Maxay yihiin arrimaha caafimaadka maskaxda iyo jirka ah ee ay sababi karto? Saamayn intee leeg ayey ku leedahay hanashada ama xiriirka?
Ardaydu waxay bartaan sida maskaxdu u baran karto jimicsi is-xakameyn, is-xakameyn iyo istiraatiijiyado ka caawiya in lagu gaaro taas. Waxay ogaadaan ilaha si ay uga caawiyaan inay si fiican u war helaan oo ay awoodaan inay sameeyaan xulashooyin wanaagsan
Casharka 3: Galmada, Sharciga, iyo Adiga
Galmada galmada ma ahan erey sharci laakiin waxay leedahay cawaaqib xumo sharci oo dhab ah. Waa sharci darro in carruurtu sameeyaan, soo diraan oo ay helaan sawirro anshaxdarro ah oo carruurta ah, xitaa iyagoo ogolaansho haysta. Boolisku wuxuu u arkaa arin ilaalin ah. Haddii qof dhalinyaro ah looga dacweeyo booliska dembiyada galmada, waxay saameyn ku yeelan kartaa mustaqbalka shaqada, xitaa iskaa wax u qabso, haddii ay ku lug leedahay la shaqeynta dadka nugul.
Waxaan halkaan ku soo bandhigeynaa labo qorshe oo cashar ah (qiimaha mid), mid dugsiga hoose iyo mid dugsiga sare ah. Mid waliba wuxuu leeyahay daraasado kiis oo kala duwan si ay uga tarjumaan heerarka qaangaarka ee isbeddelaya. Daraasadaha kiisku waxay ku saleysan yihiin kiisaska sharciga tooska ah ee tooska ah waxayna ka tarjumayaan xaaladaha guud ee ay ardaydu ka heli karaan.
Xirmooyinka Daraasadda Kiiska ee Macallimiintu waxay bixiyaan jawaabo iyo talooyin kala duwan si ay uga caawiyaan ardayda inay ka fekeraan oo ay ka wada hadlaan xaaladdan khiyaanada leh ee laga helay Xirmooyinka Daraasadaha ee Ardayda. Waxay u oggolaadaan ardayda inay ka wada hadlaan arrimaha meel ammaan ah waxayna gacan ka geystaan ​​dhisidda adkeysi loo isticmaalo dibedda fasalka.
Sharciga waxaa baaray Adeegga Dacwad-qaadista ee Boqortooyada Ingiriiska iyo Wales, Xafiiska Boqortooyada iyo Adeegga Ciqaab ee Xeer-ilaalinta iyo Maamulka Warbixinta Carruurta ee Scottish-ka ee Scotland, saraakiisha booliska iyo qareennada ayaa baaray.
Sexting, Sharciga & Adiga, England
£0.00 Ku dar gawaarida
Sexting, Sharciga & Adiga, Wales
Sexting, Sharciga & Adiga, Iskotland